Martin Luther, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Martin Luther: Noloshiisa iyo Qayb qaadashadii Masiixiyada
Mid ka mid ah shaqooyinka aan ugu jeclahay saacadaha-dhiman waa barashada taariikhda ee xarunta waxbarashada dadka waaweyn. Waxaan dhawaan soo marnay Bismarck iyo mideynta Jarmalka. Buuggu wuxuu yiri: Bismarck waa hogaamiyaha ugu muhiimsan Jarmalka tan iyo Martin Luther. Hal ilbidhiqsi waxaan dareemay inaan damcay inaan sharraxo sababta fikirka fiqi ahaaneed ee noocaas ahi u heli karo bogaadin noocaas ah, laakiin markaa si fiican ayaan uga fikiray waanan iska indha tiray.
Halkan waxaa lagu soo qaatay mar labaad: Muxuu qof diin ah oo darajadiisu tahay Jarmalka ka ugu saraysa buug buugga Mareykanka? Hordhac habboon oo xiiseeya mid ka mid ah jilayaasha ugu xiisaha badan taariikhda adduunka.
Sidee buu qofku xaqnimo ugu samayn karaa Ilaah?
Martin Luther, waa udub-dhexaadka kacaanka Protestant, wuxuu dhashay 1483 wuxuuna ku dhintey 1546. Wuxuu nin weyn ku ahaa halyeeyo taariikhyahan aad u wanaagsan. Machiavelli, Michelangelo, Erasmus iyo Thomas Morus waxay ahaayeen taariikhdiisa; Christopher Columbus ayaa degtay marki Luther uu aaday iskuulka Latinka.
Luther wuxuu ku dhashay magaalada Thuringian ee Eisleben. Waqti ay geerida ilmaha iyo dhallaanka ahaayeen 60% ama ka badan, Luther wuxuu nasiib u yeeshay inuu dhasho gebi ahaanba. Aabihiis Hans Luder, oo horey u ahaa macdan qalin, wuxuu ka dhigay barwaaqo isagoo madax ka ah aqal hoyga ee macdanta "steel oil". Jacaylka Luther ee muusikada wuxuu siin jiray magdhow ciqaab adag oo ku saabsan barbaarinta waalidkiis, oo daryeelay isaga, laakiin sidoo kale gacanta adag ku ciqaabay. Lix iyo lix iyo toban, Luther wuxuu horey u ahaa Latin Latin awood u leh waxaana loo diray Jaamacadda Erfurt. Sanadkii 1505, markuu jiray laba iyo labaatanaad, wuxuu qaatay shahaadada sayidkiisa iyo naaneysii falsafada.
Aabihiis wuxuu go’aansaday in Master Martin uu sameeyo qareen wanaagsan; Ninkii dhalinyarada ahaa isma uusan caabin. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, intii aad ku sii jeeday Mansfeld una aaday Erfurt, Martin wuxuu galay onkod culus. Hillaac hillaac ah ayaa dhulka ku tuuray, oo sida caadada u ah Catholic ka wanaagsan, wuxuu ku qayliyey: I caawi, Saint Anna, waxaan rabaa inaan noqdo daanyeero! Wuxuu ku sharfay ereygaas. Sanadkii 1505 wuxuu galay amarkii guuritaankii Augustiniya, sanadkii 1507 ayuu aqriyay curashadiisii ​​ugu horeysay. Kadib James Kittelson (Luther Reformer), asxaabta iyo walaalo wali ma aysan helin sifooyin wanaagsan oo ka dhacay daanyeerka dhalinyarada ah taasoo ka dhigtay inuu noqdo qof si heer sare ah toban sano gudahood. Luther ayaa markii dambe yiri, hadii ay ahaan laheyd mid bini'aadanimo suurta galnimada in jannada lagu guuleysto sida monkiga, oo ku saabsan dhawristiisa adag ee xeerarka diinta ayagoo sooman soonkooda iyo qalin jimicsiga, runtii wuu sameyn lahaa.
Waqti dabeyl ah
Waqtigii Luther wuxuu ahaa xilli qarniyaal, dad sodcaal ah iyo geerida meelwalba taagan. Qarniyadii dhexe ayaa soo gabagabeeyey fiqi ahaan Katooligkuna wali gadaal ayuu usocdaa. Reer cibaadada reer yurub waxay isu arkeen inay ku xardhan yihiin baahidooda sharciyeed, sida karaamada baska, qirashada iyo dulmiga ay wadaan wadaadka. Dhallinta Luther-ka Luther-ka ahi waxay ku gabyi karaan hees ku saabsan bur-burinta, gaajada iyo harraad, yaraanta hurdo la’aanta iyo is-muujinta. Si kastaba ha noqotee, baahidiisa damiirka ma uusan qancin. Edbinta adag ee diinta ayaa kordhisay dareenkiisa dambiga. Waxay ahayd qulqulka sharciga - sideed ku ogaan kartaa inaad kufilisay?
In kasta oo uu ku noolaa sida wadaad oo aan eed lahayn, ayuu qoray Luther, laakiin waxa uu dareemay xanuunka ugu weyn ee damiirka ah ee loo malaynayo in uu dembiile ku yahay Ilaah hortiisa. Laakiin anigu ma aan jecli karin kii xaq ah, oo Ilaah ciqaaba, waan necbahay isaga ... waxaan u cadhooday Ilaah, haddii uusan ahayn af xumo qarsoon, laakiin murugo weyn ayaan idhi, Miyaanay ahayn in ku filnaato in murugaysan, weligiis xukumay dambiilayaashu oo ay la jiraan dhammaan nooc kasta oo xun xun sida ku xusan sharciga Tobanka Amar? Ilaah miyuu weli sii wadaa inuu ku darsado silica injiilka oo uu naguugu hanjabo xaqnimadiisa iyo cadhada injiilka?
Aflagaadada noocan oo kale ah iyo daacadnimada runta ayaa had iyo goor caan ka ahayd Luther. In kasta oo dunidu si fiican u ogtahay shaqadiisa dheer iyo sheekada noloshiisa si wanaagsan - afgambigiisii ​​ka dhanka ahaa kaniisadda quruxda badan ee indho-sarcaadka, sadaqada iyo caddaaladda howsha - haddana dad aad u yar ayaa qiray inay had iyo jeer ahayd su'aasha damiirka Luther. Su’aashiisa aasaasiga ah aad bay u fududayd: Sidee qofku u cadaalad samayn karaa Ilaah? In ka badan dhammaan caqabadaha-dadku sameeyay ee daah-furay fududaanta injiilka, Luther wuxuu diiradda saaray wixii dad badan ee masiixiga ka illoobeen - farriinta xaq ka dhigashada ee rumaysadka keliya. Caddaaladdani waxay ka sarreysaa wax walba oo waa mid aasaasi ah oo dabeecad ahaan ka duwan kan caddaaladda ka jira cilmaani-siyaasadeedka iyo caddaaladda aagga kaniisadda.
Luther wuxuu ka dhawaajiyay qaylo dhaan onkod ah oo looga soo horjeedo dhaqan-xumada xilligiisa. Shan boqol oo sanadood ka dib, waxaa mudan in loo arko isaga sida uu eedeysaneyaasha kale ee Masiixiyiinta ah u arko: isaga oo ah wadaad aad u jecel oo caadi ahaan garab taagan dambiilaha la dulmay; wacdiye ahaan amarrada ugu sarreeya ee waxa ugu muhiimsan - nabadgelyo lala lahaado Ilaah (Rooma 5,1); sidii badbaadiye ee damiirka jirdilay ee su’aalaha la xiriira Eebbe.
Luther wuxuu noqon karaa mid cibaado leh, u caashaqsan sida reer buuraley ah. Cadhadiisa dadka, wuxuu u maleeyay, inay ka soo horjeedaan fariintiisa saxda ah waxay noqon kartaa mid laga cabsado. Waxaa lagu eedeeyay inuu ka soo horjeeday Semitism-ka, oo aan sabab lahayn. Laakiin khaladaadka Luther oo dhan waa inuu tixgeliyaa: farriinta masiixiga dhexe - badbaadada xagga iimaanka - waxay qatar ugu jirtay galbeedka wakhtigaas. Ilaah wuxuu u soo diray nin badbaadin kara iimaanka ciida rajo la’aanta ah ee qalabka aadanaha hadana ka dhigaya mid soo jiidasho leh. Aadanaha iyo dib-u-habeynta Melanchthon ayaa khudbaddiisa aaska ka sheegay Luther inuu ahaa dhakhtar xiiseeya da'da jira, oo ah aaladda dib u cusboonaysiinta kiniisadda.
Nabad gal ilaah
Taasi waa farshaxanka masiixiga oo keliya, Luther wuxuu qoraa, inaan ka leexdo dembigayga oo aanan rabin inaan wax uun ka ogaado, oo aan u jeesto xaqnimada Masiixa, inaan si fiican u aqaano inuu Masiixu ula jeedo cibaado, maamuus, xushmad iyo quduusnaan. Hubso inaan ogahay in jirkani aniga yahay. Waan ku noolahay, ku dhintaa oo halkaas ku kaxeeyaa maxaa yeelay isagu wuu inoo dhintay oo haddana annaga ayuu noo sara kacay. Anigu ma ihi mid cibaado leh, laakiin Masiixu waa cibaado. Waxaa laygu baabtiisay magaceeda ...
Kaddib halgan adag oo xagga ruuxa ah iyo dhibaatooyin badan oo nolosha ku xanuunsanaya, Luther wuxuu ugu dambeyntii helay xaqnimada Ilaah, xaqnimada uu Ilaahay ka imanayo xagga iimaanka (Filiboy 3,9). Taasina waa sababta uu maansadiisu gabay ugu dhigtay rajo, farxad, kalsooni ku qabka fikirka Ilaaha Qaadirka ah, oo karti weyn leh, kaasoo, in kasta oo uu yahay, uu garab taagan yahay dembiilaha toobad keena ee shaqadiisa Masiixa. In kasta oo uu ahaa dambiile sida sharciga waafaqsan ee ku saabsan caddaaladda sharciga, Luther wuxuu qoraa haddii uusan rajo dhigin inuusan dhiman doonin maxaa yeelay Masiixu wuxuu ku nool yahay, kaasoo labadaba ah, xaqnimada aadanaha iyo nolosha weligeed ah ee jannada. Xaqnimadaas iyo noloshaas, Luther, mar dambe ma uusan aqoon dambiga, damiir la'aan, walwal kama qabin dhimashada.
Waxyaalaha dhalaalaya ee Luther wuxuu u yeerayaa dambiilayaasha si ay u sheegaan iimaan run ah oo yaanay ku dhicin dabinka nimcooyinka iftiinka waa yaab iyo qurux. Rumaysadku waa shay Eebbe inaga dhex shaqeeyo. Isagu wuu beddelaa annaguna Ilaah baannu ku dhalan doonnaa. Xoogga aan la qiyaasi karin iyo awoodda aan la qiyaasi karin ayaa ku dhex jira isaga. Isagu weligiis wanaag buu samayn karaa. Waligiis sugi maayo oo wuxuu weydiinayaa inay jiraan wax qabad fiican oo la sameeyo; laakiin inta aan su’aasha la weydiinin, wuxuu durbadiiba sameeyay falka waana uu sii wadaa.
Luther wuxuu dejiyay shuruud la'aan, kalsoonida ugu sarreysa ee awoodda cafiska ee Ilaah: Masiixiyaddu wax aan ahayn maahee waxay ahayd caado joogto ah oo ah dareentid in qofku uusan lahayn wax dembiyo - in kasta oo uu dembiyo galay - laakiin in dembigiisa qofka lagu tuuro Masiixa. Waa ay wada dhahdaa. Caqiidadan xad dhaafka ah, Luther wuxuu weeraray hay'addii ugu awoodda badneyd waqtigiisii, papacy-ga, wuxuuna sababay Yurub inay dhageysato. Xaqiiqdii, qirashada furan ee halgankiisii ​​socda ee Ibliiska, Luther weli waa nin da 'dhexe ah. Sida Heiko A. Oberman uu ka sheegayo Luther - Man inta u dhaxaysa Eebbe iyo Ibliis: Falanqaynta cilmi nafsiga waxay ka takhalustaa Luther inta ka hartay fursadaha uu ku dhigto jaamacadda maanta.
Sikastaba ha noqotee: Is-furitaankiisa, soo bandhigiddii halganka gudaha, ee ay ku arki jireen indhaha adduunka, Master Martin wuxuu ka horreeyay waqtigiisa. Ma lahayn karti xirfadeed oo ku saabsan raadinta cudur-sidaha jirkiisa iyo sidoo kale si xoog leh ugu dhawaaqista dawaynta. Isaga oo ku dadaalaya inuu naftiisa u huuro, mararka qaarna aan kala shaandheyn, is-falanqeyntiisa qoraalkiisa wuxuu siinayaa dareenka diirimaadka ah ee u gudbaya qarniga 21-aad. Wuxuu ka hadlayaa farxadda qoto dheer ee buuxisa qalbiga markay dadku maqlaan farriinta masiixiga oo ay heleen raaxada injiilka; Ka dib wuu jeclaa Masiixa madaama uusan waligiis u sameyn karin sharciga ama shaqooyinka darteed. Qalbigu wuxuu rumeysan yahay in xaqnimada Masiixu markaa ay tahay isaga oo dembigiisuna uusan ahayn tan u gaarka ah laakiin uu yahay tan Masiixa; in dembiga oo dhan lagu wada baabbi'iyey xaqnimada Masiixa.
Maxaa loo arki karaa dhaxalka Luther (erey badanaa afka lagu isticmaalaa maanta)? Markii la fulinayay howlihiisii ​​weynaa ee uu kaga soo horjeeday Masiixiyadda badbaadada iyadoo la adeegsanayo nimco, Luther wuxuu sameeyay seddex tabo fiqi oo aasaasiya. Iyagu waxay ahaayeen kuwa xuska badan.Wuxuu baray mudnaanta damiirka shaqsiyadeed xoogagga cadaadiska. Wuxuu ahaa Thomas Jefferson ee masiixiga. Wadamada waqooyiga yurub ee Ingriiska, faransiiska iyo Nederland, dhulkan wanaagsan wuxuu ku dhacay dhul beereed; Qarniyadii ka dambeeyay waxay noqdeen asaasayaal xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda shaqsiga.
Sanadkii 1522 wuxuu daabacay tarjumaadiisa Axdiga Cusub (Newe Testament Deutzsch) oo ku saleysan qoraalka Griigga ee Erasmus. Tani waxay u abuurtay tusaale dalalka kale - Latin dambe, laakiin injiilka afka hooyo! Tani waxay siisay akhrinta Baybalka iyo horumarka aqooneed ee Galbeedka - oo aan lagu xusin suugaanta Jarmalka - xoojin xoog leh. Ku adkaysashada dib-u-hagaajinta Sola Scriptura (Kaliya Qorniinka oo keliya) ayaa kor u qaaday nidaamka waxbarashada - ka dib oo dhan, waa inaad baratay akhriska si loo barto qoraalka xurmada leh.
Luther xanuunka badan laakiin ugu dambeyntii guuleystey damiirka iyo cilmi baarista nafta, taas oo uu ku fuliyay fagaare, wuxuu dhiirrigeliyay qirasho, furfurnaan cusub ee ka doodista su'aalaha xasaasiga ah ee aan saameyn ku yeelanin kaliya wacdiyayaal sida John Wesley, laakiin sidoo kale qoraayaasha, taariikhyahannada iyo cilmi-nafsi yaqaanno qarniyadii soo socda.
Tirtir kaynta iyo ulaha
Luther wuxuu ahaa bini aadam, aadam sidoo kale. Mararka qaar wuxuu ka xishoonayaa difaacayaasheeda aadka u culus. Aflagaadada uu u geysanayo Yuhuudda, kuwa caanka ah, Turki iyo Rottengeister ayaa weli timahaaga ka taga dhamaadka. Luther wuxuu uun ahaa dagaalyahan, halyeeyga leh faasas qaloocsan, qof haraya oo nadiifiya. Masaafada ayaa wanaagsan marka duurka la nadiifiyo; laakiin tirtira duurka iyo ulaha, oo diyaarsada duurka, qofna ma doonayo inuu taas sameeyo, wuxuu ku qoraa warqadda ka turjumidda, xaqiisa uu u leeyahay tarjumaadiisa epochal ee Kitaabka Quduuska ah.
Dhinacyadeeda oo dhan mugdiga ah: Luther wuxuu ahaa muftaaxa furaha ee Dib-u-habeynta, oo ah mid ka mid ah qodobbadii ugu waaweynaa ee taariikhda laga soo beddelay, Mu'miniinta Mu'miniinta aaminaadda loo jeediyo waxay noqotay meesha laga soo weecdo dhacdooyinka qarnigii hore. Haddii ay sidaas tahay, haddii aan ku xukumi lahayn shakhsiyaadka ku saleysan waqtigooda iyo saameyntooda waqtigooda dhaafsiisan, markaa Masiixiyiintu runti waa ku faani karaan in Martin Luther yahay nin taariikh ahaan heerkiisu la joogo Otto von Bismarck.
waxaa qoray Neil Earle